Kohabara Online: कृषि र हामी !
कृषि र हामी !
प्रसंग :- लेख / निबन्ध, विविध, समसामयिक, साहित्य
नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने कुरालाई यहाँ प्रमाणित गरिरहनु नपर्ला । ८०% नेपाललीहरुको पेशा कृषिमा आधारित रहेको छ र करिबन ६०% नेपाली पूर्ण रुपले कृषिमा आश्रीत छन भन्ने आंकलन विभिन्न अनुसन्धानको छ । त्यसै गरी हामी र हाम्रो समाजको निर्भरता पनि पूर्ण रुपले कृषिमा नै छ भन्दा कुनै दुइमत नहोला । हाम्रा बाजे बराजु अर्थात हाम्रा सम्पूर्ण पुर्खा नै कृषिमा आधारित थिए यो अर्थमा कृषि हाम्रा पुर्बजहरुको बिरासत नै हो । हामीसँग व्यापारिक अनुभब छैन, नाम छैन न त कुनै व्यापारिक पुर्बाधार नै । त्यसै गरी प्रशासनीक क्षेत्रमा पनि दह्रो गरी अर्थात आवश्यक पहुँच र अनुभब पनि छैन । तर कृषिका लागि परपुर्बकाल देखिको अनुभब छ । श्रमकालागी आवश्यक जमिनको अभाब छैन । राँगा, भैंसी, गाई, गोरु, बाख्रा पाठा, कुखुरा, हाँस जस्ता कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सामाग्रीहरु छन । तर दुर्भाग्य तिनीहरुबाट हामि कुनै आम्दानि प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं । हामी, हामीसँग जे छ त्यसको प्रयोग गर्न सकिराखेका छैनौं या जानी राखेका छैनौं र हामीसँग जे छैन त्यसको खोजिमा यत्र तत्र भौतारिरहेका छौं । अरबको खाडी देखि मलेसियाको झाडी सम्मको यात्राले हामीलाई अनेकौं हण्डर र ठक्कर नदिएको होइन तर पनि हामीमा चेत फिरेको छैन । हामीसँग भएको अनमोल सम्पदाहरुको तिजौरिको चाबी खोल्न नजानेर अत्यन्त सस्तो र अपमानित ढंगले पराई भुमिमा आफ्नो श्रम बेच्न विवश छौं । त्यसले न त हाम्रो पारिवारिक या व्यक्तिगत बर्तमानको आवश्यकताहरुको पूर्ति भएको छ, न त सुनौलो भविष्यको कुनै सुनिश्चता नै छ । हामी अन्धकारमा बाँची रहेका छौं र हाम्रो भविष्य पनि पूर्ण रुपले अन्धाकार नै छ ।
नेपाल र कतार (या अन्य अरब राष्ट्र)को भागोलिक तुलना गर्ने हो भने स्वर्ग (नेपाल) र नर्क(अरब)को जस्तो छ । यदि हाम्रा धर्म शास्त्रको गहन अध्यन गर्ने हो भने अरब मरुभूमि लाइ नर्कको रुपमा प्रमाणित गरेका थुपै प्रमाणहरु भेटिन्छन । तर यहि अरबी र नेपाली जिबनको बिचमा तुलना गर्ने हो भने अतुलनीय रुपमा तल (नेपाली) र माथि (अरबी) जिबन छ । अरबको हावा, पानि, माटो र मौसमको अध्यन गर्ने हो भने कुनै पनि जिबनको अनुकुल छैन । यस्ता समस्याका बाबजुद पनि यहाँ कति राम्रा राम्रा बगैंचाहरु निर्माण गरिएका छन तर ति बगैंचा निर्माणका लागि कति मिहिनेत र लागानी गरिएको छ ? हेर्नुस्त ! प्रत्येक बिरुवाको जरा-जरामा पानिको पाइप पुर्याएको अनि सयौं काम दारहरुलाई एउटा बगैचाको रेखदेखका लागि दिनरात खटाइएको । यहाँ यति मिहिनेत र लगानीका साथ प्रतिकुल हावा, पानि, माटो र समग्र प्रतिकुल मौसमका बबाजुद पनि यति राम्रा-राम्रा बगैचा निर्माण गर्न सकेका छन् .तर हामी सम्पूर्ण दृष्टिले अनुकुल अवस्थामा रहंदा रहँदै पनि अरु त अरु तिहार जस्तो चाडमा पनि आवश्यक फुलको अभाबमा अत्यन्त कुरूप माला गलामा लगाएर फोस्रो आनन्द लिईरहेका हुन्छौ । .अरबले कृषिलाइ कति माया गरेको छ भन्ने कुराको अनुमान अरबीले आफ्नो बारीमा उत्पादन गरेको साग सब्जी हेरेर पनि गर्न सक्छौं । हेरौं त, एउटा खजुरको बोटलाइ फल लाग्नु अघि र फल लागिसके पछि पनि कति मिहेनतले स्याहार गर्छन । फल झर्छ या चराचुरुंगीले नष्ट गर्छ भनेर जालीले बेरेर संरक्षण गरेको हुन्छ र यता हामी भने न त हाम्रा घर आँगन या बारीमा भएका बहुमुल्य बोट बिरुवाको संरक्षण गर्छौं न त तिनका फलको । एउटा आँपको रुखमा उचित रेखदेखको अभाबमा प्रयाप्त फल नै लाग्दैन, लागेको फल पनि ७५% त चिचिलामै झरेर जान्छन र बाँकी मा १५%चिचिलाबाट पूर्णरुपले तयार हुँदा सम्ममा अनेक कारणले ५ % जति नष्ट हुन्छन र बाँकी १०% फलमा हामी सन्तुष्ट हुन्छौं । अब तपाइँ नै भन्नुस हाम्रो यो भन्दा ठुलो बिडम्बना अरु के हुन्छ ???
हामीसँग श्रमकालागी आवश्यक जमिन छ तर त्यहाँ बाट हामी उचित रुपमा धान, गँहु, मकै जस्ता बालिहरुको उत्पादन गर्न सकी रहेका छैनौं साथै हाम्रो प्रत्येक छाक तरकारीको गर्जो टाढाबाट आयात गरिएका तरकारी नाकिनिकन टर्दै टर्दैन । हामीसँग दुध उत्पादनका साधन गाई, भैंसी छन मासु उत्पादनका लागी राँगा, बाख्रा ,हाँस ,कुखुराहरु छन त्यस्तै अण्डा उत्पादनकालागी हाँस कुखुराको कुनै कम्मी छैन । यी सब मध्यमबाट हामीले अथाह उत्पादन गरी त्यसको निर्यातबाट समृद्री हासिल गर्नु पर्ने हो तर हामीले त उपयुक्त साधनबाट आफ्ना आधारभूत भन्दा आधारभूत आवश्यकताहरु पनि पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ । के हामीले ब्ल्याक टी खाएको रहर ले हो र ? एक पटक कोहबरालाई आधार मानेर समाज परिबर्तनका लागि सोचौं त ! के माइक्रोसफ्टको ब्यापारले कोहबरेलीहरुको जिबनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ? के ठुला उधोग धन्दा निर्माण गरी सम्पूर्ण कोहबरेलीहरुलाइ रोजगार दिलाउन सम्भब छ ? कि अन्य ब्यापार ब्यबसाय बाट ? छैन, यी कुनै पनि माध्यमबाट कोहबरेलीहरुको जिबन स्तरमा सुधार ल्याउन सम्भब छैन । सम्पूर्ण कोहबरेलीहरु कृषिका स्रोत, साधन, सिप र अनुभबले सु-सम्पन छन । त्यसैले यदि कोहबरा र कोहबरेलीहरुमा परिबर्तन गर्ने गराउने हो भने त्यो कृषि नै हो । पर्याप्त नभए पनि एक हद सम्म कोहबरेलीहरुको अहिलेको आम्दानिको अतिरिक्त दैनिक ५० रुपैया मात्र पनि आम्दानि हुने हो भने सम्पूर्ण कोहबरेलीहरुको जनजिबिकामा सहजता आउछ । उदाहरणको लागी ५० रुपैया भनेको १० ओटा अण्डा वा २.५ लिटर दुध वा १ पावा कुखुराको मासु हो । खसीको मासु त ५० रुपैयामा कुनै पनि परिमाणमा पाउन सकिदैन । राँगा ,सुँगुर, बंगुरको मासु पनि ५० रुपैयामा ०.५ केजी पनि आउदैन । हामीसँग उपलब्ध हुने फलफुलहरुमा विशेष गरेर आँप हो, हुनत: यो दैनिक रुपमा उत्पादन हुँदैन तथापी यसको बार्षिक उत्पादन लाई दैनिक रुपमा विभक्त गर्ने हो भने ५० रुपैयाको ५ केजी भन्दा बढ्ता पर्दैन । तरकारी उत्पादन कै कुरा गर्ने हो भने पनि दैनिक साना १० मुठा साग,२ किलो आलु र यस्तै-यस्तै अन्य थोरै परिमाणका तरकारीहरु नै हुन् । ५० रुपैया मुल्य बराबरका माथि बर्णन गरिएका स्रोत साधनबाट हामी सु-सम्पन भएता पनि हामीले न्युनतम भन्दा न्युनतम उपलब्धि पनि हाँसिल गर्न सकेका छैनौं । कृषि प्रतिको नकारात्मक धारणाले नै हो - यो सब समस्या को सिर्जना गरेको । हामीमा कृषि भन्ना साथ दिनभरी हलो जोतेको याद झल्झली आउछ तर यो मात्र कृषि होइन अब हामीले कृषिको परिभाषालाई ब्यापक ढंगले बुझ्नु जरुरि छ र प्रयोग गर्न पनि । हुन त नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हामी माछा, मासु, अण्डा ,दुध, तेल, दाल तरकारी लगायतका कृषि जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएका छैनौं ।
आज विश्वले धेरै थोकमा धेरै बिकास गरी सकेको छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि ब्यापक परिबर्तन र बिकास भै रहेको छ । हामीले पनि बुद्दी पुर्याउने र माथि उल्लेखित उत्पादनका स्रोत साधन लाई आधुनिकिकरण र औधोगीकरण गरेर ब्यापक उत्पादन गरि निर्यात गर्न सक्ने हो भने हामि आफ्नो मात्र होइन सम्पूर्ण समाज तथा राष्ट्रमा नै आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गरि समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सक्छौं । एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्छ भने आजको समय उच्च प्रविधि सहितको समुन्नत कृषि उधोगको हो खाई खेति को होइन । त्यसैले हामीले कृषि प्रतिको नकारात्मक र संकुचित धारणालाई त्यागेर सकारात्मक र ब्यापक धारणा को निर्माण गर्नु पर्छ । यहि नै आजको आवश्कता हो र सम्भावना पनि ।
लेखक : बिपिन ओझा !